प्रधानमन्त्री ओलीकाे यस्तो छ अवस्था! हिड्न थाले, अब केहि दिनमै अस्पतालवाट विदा गरिने – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रधानमन्त्री ओलीकाे यस्तो छ अवस्था! हिड्न थाले, अब केहि दिनमै अस्पतालवाट विदा गरिने
काठमाडौं, २३ फागुन । दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले अस्पतालमै स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन् । उनको काठमाडौं स्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । १२ वर्ष अघि प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम नगरेपछि उनी केही महिना यता नियमित डायलसिसमा थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि स्वास्थ्य लाभमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजदेखि सामान्य रुपमा हिँडाउन सुरु गरिएको छ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजवाट हिडाउन थालिएको बताएका छन् । उनले भने, प्रधानमन्त्रीलाई आजदेखि सामान्य हिँड्डुल गराउन र ठोस कुरा खुवाउन सुरु गरिएको छ। बुधबार दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका उनको अन्य सबै ल्याब रिपोर्ट सकारात्मक आएको छ । उनले अब केही दिनमै ओलीलाई अस्पतालवाट विदा गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहान आफ्ना सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग केहीबेर कुरा गरी आफू छिट्टै बालुवाटार फर्केर नियमित काम थाल्ने सन्देश पठाएका थिए। रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेट भएको भन्दै आफुसंग छिटै काममा फर्कन सक्ने बताएको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान गर्ने समीक्षा संग्रौलाको अवस्था पनि सामान्य भएको र उनलाई पनि ठोस पदार्थ दिन थालिएको उनले बताए।
घुस लिएको भन्दै ईन्जिनियरमाथि विप्लवका कार्यकर्ताको मोसो